Ike ikuku. Ihe niile ị chọrọ ịma | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ike ikuku
Worldwa nke ume imeghari na-aghọwanye oghere na ahịa mba ụwa n'ihi asọmpi ya dị elu ma na-enwewanye arụmọrụ. E nwere ụdị ume ọhụrụ dị iche iche (dịka m chere na anyị niile maara) mana ọ bụ eziokwu na n'ime ume ọhụrụ, anyị na-ahụ ụfọdụ "ama" dị ka anyanwụ na ike ikuku, na ndị ọzọ amachaghị dịka ike ikuku na biomass.
Na nke a, aga m ekwu maka ihe niile metụtara ike ikuku. Ebe ọ bụ na ihe ọ bụ, otu o si arụ ọrụ na uru ya na ọghọm ya na ụwa nke ume ọhụrụ.
2 Osimiri geothermal
2.1 Mmiri mmiri ọkụ
2.1.1 Mmiri na-ekpo ọkụ na nnukwu okpomọkụ
2.1.2 Mmiri na-ekpo ọkụ na ọkara okpomọkụ
2.1.3 Igwe mmiri na-ekpo ọkụ na obere okpomọkụ
2.1.4 Igwe mmiri na-ekpo ọkụ na obere okpomọkụ
2.2 Ala akọrọ
2.3 Ego Geyser
3 Ojiji nke ike geothermal
4 Uru nke ike ikuku
5 Uzo ojoo ike nke geothermal
Geothermal ike bụ ụdị nke ume ọhụrụ nke dabere na ya n'iji okpomọkụ nke dị na ala ala nke ụwa anyị. Nke ahụ bụ, jiri okpomọkụ nke ihe dị n’ime ụwa ya na-ewepụtakwa ume. Ike ohuru nwere ike iji ihe ndị dị na mpụga dịka mmiri, ikuku na ìhè anyanwụ. Otú ọ dị, ike dị na mbara igwe bụ naanị otu onye na-agbanahụ ụkpụrụ mpụga a.
Isi mmalite: https://www.emaze.com/@ALRIIROR/Presentation-Name
See hụla, e nwere grajentị gradient dị ala n’okpuru ala anyị na-azọ ụkwụ. Nke ahụ bụ, okpomọkụ nke ụwa ga-abawanye ka anyị gbadatara ma bịarukwuo ụwa nso. Ọ bụ eziokwu na ụda kacha mie emie nke ụmụ mmadụ ruru erughị kilomita iri na abụọ n’omimi, mana anyị maara na gradient thermal na-abawanye. ọnọdụ okpomọkụ nke ala dị n’etiti 2 Celsius na 4 Celsius nke ọ bụla mita 100 anyị gbadara. E nwere mpaghara dị iche iche nke ụwa ebe gradi a ka ukwuu ma ọ bụ n'ihi n'eziokwu na eriri ụwa dị njọ n'oge ahụ. Ya mere, ihe ndị dị n’ime ụwa (dịka akwa ahụ, nke na-ekpo ọkụ) dị nso n’elu ala ma nyekwuo ọkụ.
Nke ahụ kwuru na-ada ụda nke ukwuu, mana ebee na etu esi esi nweta ike ikuku mmiri?
Dịka m kwuchara na mbụ, enwere ebe mbara ala ebe ọkụ ọkụ dị omimi dị omimi karịa karịa ebe ndị ọzọ. Nke a na - akpata na ume ọrụ na ọgbọ nke ume site na okpomoku nke ụwa dị elu karịa.
Ọtụtụ mgbe, ike imepụta ihe banyere ike ikuku dị obere karịa ike nke ike anyanwụ (60 mW / m² maka geothermal ma e jiri ya tụnyere 340 mW / m² maka anyanwụ). Otú ọ dị, n’ebe ndị a kpọtụrụ aha ebe gradient thermal dị ukwuu, nke a na-akpọ ọdọ mmiri dị iche iche, ikike nke mmepụta ume dị elu (ọ ruru 200 mW / m²). Nnukwu ikike a maka imepụta ume na-emepụta ikpo ọkụ na aquifers nke enwere ike iji ya rụọ ọrụ.
Iji wepu ume site na mmiri na-ekpo ọkụ nke mmiri, ọ bụ ihe mbụ dị mkpa iji mepụta ọmụmụ ahịa ahịa ahịa ebe ọ bụ na ọnụahịa nke mkpọpu ala na-eto nke ukwuu na omimi. Nke ahụ bụ, ka anyị na-egwu miri miri emi n'ime a na-eme mgbalị iji wepụ okpomọkụ n'elu.
N'ime ụdị nkwụnye ego nke ala anyị na-achọta atọ: mmiri ọkụ, akọrọ na geysers
Mmiri mmiri ọkụ
E nwere ụdị mmiri mmiri ọkụ abụọ: ndị nke isi na ala. Enwere ike iji nke mbụ dị ka baths bath, na-agwakọta ha ntakịrị na mmiri oyi iji nwee ike ịsa ahụ na ha, mana o nwere nsogbu nke ọnụego dị ala.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere ọdọ mmiri ndị dị n'okpuru ala bụ ọdọ mmiri nke na-ekpo ezigbo okpomọkụ ma na-emighị emi. Enwere ike iji ụdị mmiri a inwe ike iwepu ya ime okpomọkụ. Anyị nwere ike ịgbasa mmiri ọkụ site na nfuli iji nweta okpomọkụ ya.
Kedu ka esi erigbu mmiri mmiri ọkụ? Iji nweta ike nke mmiri mmiri ahụ, a ga-enwerịrị mmefu ya na ọtụtụ olulu mmiri, n'ụzọ ga-enweta mmiri olulu mmiri ọ bụla ma weghachite ya site na ịmịnye ya na aquifer mgbe ọ jụrụ ala. Nke a na ụdị nrigbu e ji mara pma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka enweghi ngwụcha oge ebe ọ bụ na puru omume nke imebi ọdọ mmiri ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nil, ebe ọ bụ na a na-agbanye mmiri ahụ n'ime aquifer ahụ. Mmiri ahụ na-agbanwe oge niile na oke mmiri anaghị agbanwe agbanwe, yabụ anyị anaghị emebi mmiri dị ugbu a na aquifer, mana anyị na-eji ike ya dị egwu maka kpo oku na ndị ọzọ. O nwekwara nnukwu uru na anyị na-ahụ na enweghị ụdị mmetọ ebe ọ bụ na mmiri mmiri emechiri emechi anaghị anabata nsị ọ bụla.
Dabere na ọnọdụ okpomọkụ anyị na-achọta mmiri na mmiri, ike amịpụtara ga-enwe ọrụ dị iche iche:
Mmiri na-ekpo ọkụ na nnukwu okpomọkụ
Anyị na-achọta mmiri na okpomọkụ nke ruru 400 Celsius C na uzuoku na-emepụta n'elu. Site na turbine na onye ozo, enwere ike meputa ike eletrik ma kesaa ya na obodo site na netwoki.
Mmiri na-ekpo ọkụ na ọkara okpomọkụ
A na-achọta mmiri mmiri a na aquifers nwere okpomọkụ dị ala, nke, na ọtụtụ ha ruru 150 Celsius. Ọ bụ ya mere ntụgharị nke alụlụ mmiri na ọkụ eletrik ji arụ ọrụ dị ala karị ma ọ ga-erigbu ya site na mmiri na-agbanwe agbanwe.
Igwe mmiri na-ekpo ọkụ na obere okpomọkụ
Nkwụnye ego a nwere mmiri dị ihe dị ka 70 Celsius ya mere okpomoku ya na-abia site na gradient geothermal.
Anyị na-ahụ mmiri nke okpomọkụ ya kacha iru 50 ° C. Ike ikuku mmiri a nke enwetara site na ụdị mmiri a na-enyere anyị aka igbochi ụfọdụ mkpa anụ ụlọ dịka kpo oku ụlọ.
Mmiri na-akọrọ bụ ebe okwute kpọrọ nkụ ma na-ekpo ọkụ nke ukwuu. Na ụdị nkwụnye ego a enweghị mmiri ọ thatụ thatụ nke na-ebu ume ala ma ọ bụ ụdị ihe ọ bụla na-emetụta ya. Ọ bụ ndị ọkachamara na-ewebata ụdị ihe ndị a ka ha wee nwee ike ibunye okpomọkụ ahụ. Nkwụnye ego ndị a nwere mkpụrụ dị ala na ọnụahịa mmepụta dị elu.
Kedu ka anyị si ewepụta ike geothermal site na mpaghara ndị a? Iji nwee arụmọrụ zuru oke ma nweta uru akụ na ụba, a chọrọ mpaghara dị n'okpuru ala nke na-adịchaghị omimi (ebe ọ bụ na ụgwọ ọrụ na-abawanye nke ukwuu ka omimi na-abawanye) yana nke nwere akọrọ ma ọ bụ okwute ma na oke ọkụ. A gbapuru ụwa iji ruo ihe ndị a na mmiri na-agbanye n'ime mkpọpu ala. Mgbe a gbanyere mmiri a, a na-eme oghere ọzọ site na nke anyị ga-ewepụ mmiri ọkụ iji jiri ike ya.
Ihe ọghọm nke ụdị nkwụnye ego a bụ na teknụzụ na akụrụngwa iji mezuo omume a ka enweghi ike inweta ego, ya mere a na-arụ ọrụ na mmepe ya na mmelite ya.
Geysers bụ isi iyi na-ekpo ọkụ nke na-agbapụta uzuoku na mmiri ọkụ. Ọ dị ole na ole na mbara ụwa. N'ihi na ha nwere uche, geysers hụrụ na gburugburu ebe nkwanye ùgwù na nlekọta ha ga-adị elu ka ọ ghara ime ka arụmọrụ ha ka njọ.
Iji wepu okpomọkụ sitere na mmiri giiza, a ghaghị iji okpomọkụ ya mee ihe site na turbines iji nweta ike igwe. Nsogbu nke ụdị extractions bụ na ntinye nke mmiri ugbua na obere okpomọkụ na-eme ka magmas dị jụụ ma mee ka ha gwụ. Enyochaala na ịmịnye mmiri oyi na ịmịpụta magmas na-ewepụta ala ọma jijiji obere ma na-agakarị.
Ojiji nke ike geothermal
Anyị ahụwo ụdị nke mmiri maka mwepụ nke ike ikuku, ma anyị enyochabeghị ojiji a ga-enye ha. Taa enwere ike iji ike geothermal rụọ ọrụ n'ọtụtụ akụkụ nke ndụ anyị na-adị kwa ụbọchị. Enwere ike iji ya kpoo ma mepụta ọnọdụ ziri ezi na griin haus ma nye ụlọ maka ụlọ ahịa na ebe ịzụ ahịa.
Enwekwara ike iji ya maka mmiri jụrụ na imepụta mmiri ọkụ ụlọ. Ke ofụri ofụri ike geothermal na-eji spas, kpo oku na mmiri ọkụ, ọgbọ eletrik, maka mmịpụta nke mineral na ọrụ ugbo na aquaculture.
Uru nke ike ikuku
Ihe mbụ anyị kwesịrị ime ka ọ pụta ìhè banyere uru nke ike geothermal bụ na ọ bụ ụdị eme ka emeghari ohuru ya mere e weere ya dika ume di ocha. Nrigbu ya na ojiji nke ike adighi emeputa anwuru ikuku gas ma ya mere adighi emebi ozone oyibo ma obu tinye aka na ibawanye nsogbu nke mgbanwe ihu igwe.
Ma na-emepụta ihe mkpofu.
Ọnụ ego nke ịmepụta ike eletrik site na ụdị ike a dị oke ọnụ. Ha dị ọnụ ala karịa osisi coal ma ọ bụ osisi ike nuklia.
A na-ekwenye na ike nke ikuku geothermal nke nwere ike ịdị elu karịa mmanụ niile, gas gas, uranium, na kol jikọtara.
Uzo ojoo ike nke geothermal
N'ikpeazụ, dịka ọ bụghị ihe niile mara mma, anyị ga-enyocha ọghọm dị n'iji ike ikuku ala.
Otu n'ime nnukwu ọghọm bụ na ọ ka nwere ntakịrị mmepe teknụzụ. N'ezie taa Anaghị akpọtụ aha mgbe edere ihe ndị nwere ike imegharị ihe.
E nwere ihe egwu dị na ya n'oge ị na-erigbu ya hydrogen sulphide na arsenic, nke na-emetọ ihe.
Nchịkọta ókèala ala pụtara na a ga-etinye osisi ike geothermal naanị n'akụkụ ebe okpomọkụ nke ala dị oke elu. Na mgbakwunye, ume a mepụtara ga-eri oke na mpaghara ebe amịpụtara ya, Enweghị ike ibuga ya ebe ndị dịpụrụ adịpụ ka arụmọrụ ga-efu.
Facilitieslọ ọrụ nke ụlọ ọrụ geothermal na-akpata nnukwu odida obodo metụtara.
Ike Geothermal abughi ike agwu agwu n'onwe ya ebe obu na okpom oku nke ala na anakpo.
N'ebe ụfọdụ ebe ewepụtara ike a, obere ala ọma jijiji na-eme dị ka nsị nke mmiri.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ike ikuku dị na mbara ala, n'agbanyeghị na amachaghị nke ọma, nwere ọtụtụ ọrụ yana ọtụtụ njirimara iji chebara ọdịnihu nke ike ike.
Chọpụta ụdị ume ọhụrụ ndị ọzọ:
Pesdị ume ọhụrụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ike ikuku
Nwamba ụlọ agbapuru bụ ihe dị egwu nye anụ ọhịa
China gara n'ihu imebi ihe ndekọ niile nke ume ọhụrụ na 2016